Smartcards oo Isbadal kusameynaya Sanadaha yar ee Soosocda | Martech Zone
Tuesday, April 15, 2014 Isniin, April 14, 2014 Douglas Karr
Wow… marka aad ka fikirto dhammaan qalabka loo qoondeeyay oo ku tiirsan kaararka deynta dhaqameed ee magnetic, taasi waa tan tan oo qalab iyo kharash ah si loogu beddelo. Sanadaha soo socda, inkasta, taasi waa dhab ahaan waxa dhici doona! Kaararka amaahda dhaqameed ayaa ku soo aadaya.
Waxay qaadatay jabsashada 70 milyan oo kaararka Target-ka ah inta lagu gudajiray xilligii fasaxa ee 2013 si loogu kiciyo Koongarasku inuu ka tanaasulo kaararka magnetic-stripe ee aadka loo ilaaliyo ee ay isticmaalaan inta badan dadka Mareykanka isla markaana loo dhigo waqtiga kama dambaysta ah ee cusub (ee Mareykanka, si kastaba ha ahaatee) tikniyoolajiyadda casriga ah. In kasta oo Mareykanku ay bilaabayaan inay bartaan waxa kaarka casriga ahi yahay, haddana (si guul leh) ayaa looga isticmaalay suuqyada kale in ka badan 20 sano, taasoo ka dhigaysa Mareykanka inuu yahay suuqa kaliya ee ugu weyn meeraha weli adeegsanaya tallaabada wax lagu duubo iyo saxiixa.
Teknolojiyada cusub waxaa loo yaqaan EMV (waxay u taagan tahay: Europay, MasterCard iyo Visa) - sidoo kale loo yaqaan kaararka smart. Kaararka casriga ahi waxay adeegsadaan qashin iyo PIN ama farsamo iyo saxeex farsamo iyo waliba lakabyo badan oo nabadgelyo ah, oo ay ku jiraan guntin gundhig ah iyo aqoonsi gaar ah, oo isbeddeli kara wakhti kasta.
Jabsashada nidaam si macluumaad looga ururiyo loona abuuro kaarka deynta been abuurka ah waa mid dhib badan halka kaarka xariiqa magnetic, xogta si fudud ayaa loo akhrin karaa, loo qori karaa, loo tirtiri karaa ama loo beddeli karaa qalabka ka baxsan shelf, taasoo horseedaysa khayaano kaararka deynta oo sarreeya. Suuqyada la geeyay kaararka casriga ah, khasaaraha ayaa hoos u dhacay kala bar halka kuwa been abuurka ah ay hoos u dhaceen 78%. Qiimaha beddelka ayaa lagu qiyaasay $ 35 bilyan, oo ay inta badan garbaha ka iibinayaan dukaamada.
Tags: credit cardkaarka amaahdaemveuropayMasterCardkaarka smartkaarka casriga ahfiisada